Afaan Hojii Woyyaaneetiifi Isiin Dhageettu, Afaan Qawweeti; Oromoolle Afaan Qawwee Qofaan Woyyaanetti Haasawuun Dirqama. – Welcome to bilisummaa
Akka ragaan qabataamaan keessa beektotarraa argame mul’isutti, msagaalaa Bulee Horaa kana keessaa Buufata filannoo saddeetti ture; achi keessaatti, qaamoleen mootummaa osoo filanoon hin gayin duratti, buufata filannoo hundumaratti sagalee kuma tokko tokko (1,000×8=8,000) qopheessan. Sagalee uummanni kenne soogidda bishaan ergan taa’e, sagaleen qophoofte kunneen laakka’amte. Bifuma wal-fakkaatuun, Aanaa Bulee horaa keessatti kan argaman gadoota baadiyyaa 38 keessatti, bifuma wal-fakkaatuun sagaleen kumni tokko tokko (1,000×38=38,000) hiramee filannootti seename. Gandoota Filannoo sadi keessatti uummanni opdo dura dhaabbachuun sagalee sirriin keennatanii, booda immoo jalaa baleessan malee, gandoota 35 keessatti hannii opdo gufuun tokko osoo isaan hin mudatiin hojiirra oole.
Gandoota aanaa Bulee Horaa 38 keessaa, ganda Dibbisaa Oggoo jedhamurratti uummanni ija jabaatee opdo dura dhaabbachuudhaan sagalee isaanii eegatane keessatti, namoonni opdo file, namoota 73 qofa ture. ganda biraa aanaa Bulee Horaa jalatti, uummanni gandoota Toomaa Meexxii fi Maaxee Boosoo keessatti opdo dura dhaabachuudhaan sagalee isaanii to’annoon eegatanii,ganda Meexxii Toomaa keessatti opdo’n sagalee 37 qofa argatte. Ganda Dibbisaa Oggoo keessatti immoo, opdo-woyyaaneen sagalee 73 qofaa argatte. Ganda Maaxee Boosoo irratti sagalee 110 qofa aragatte opdo’n. Aanuma Bulee Horaa jalatti kan argamu, ganda Cabbii Magaadaa keessatti, sagalee kuma tokkoo kan opdo qopheeffatteen alatti, paartiin Madirek-kongireensiin Federaalawa Oromoo sagalee 321 caalmaa argamsiisee waan tureef, qodaalli opdo filannoo hachisiisuuf gubbaarraa dhufe, opdo ganda san bulchaniin, “isin hiina, sagalee madirekii kana dabalaa milikita itti godhaatii hojiin alaa taasisaa…” jechuudhaan ajaja itti kenne.
Akka fakkenyaatti, loltoonni mootummaa gaafaa 6.6.2015 godina Shawaa Lixaa naannoo Incinniitti, dargagoo Baatiruu Sorraa yoo ajjeessan, dargaggoo hedduu ammoo ukkaamsuudhaan achi buuteen isaanii dhabamaa jira. Uummanni ammoo, “namni nuuti filannee nu haa bulchuu; dargagoon keenna nuuf haa deebi’anii…” jechuudhaa iddoo garaa garaatti dheekmasiifi mufiin uummataa akka dabale himameera. Wallagaa Bahaatti namni Magaalaa Naqqamteetti paartii Kongireensii Federaalistii Oromoo bakka bu’uun dorgomee ture, Obboo Taarikuu Dassalenyi Dabaalaa, doorsiniifi mana kireeffatee keessa jiraatu keessaa, mootummaan namoota isaaf mana kireessaniif doorsisuun hanga dhiibame baafamuuttifi hedduu doorsifamaan sodaachaa akka jiru, yaada inni gaafa 7.6.2015 Oromiyaa Miidiyaa Neetiworkiif kennerraa hubachuun danda’ameera. Achuma godina Wallaga Bahaa keessatti, magaalaa Siree keessatti paartii Kongireensii Federaalistii Oromoo bakka bu’ee kan dorgome, barsiisaa Qanaasaa Ragaasaa manaa isaa irratti diiguudhaan baqatee iddoo biraa akka jiru, bakka bu’aan paartii Kongireensii Federaalistii Oromoo Wallagaa bahaafi dorgomaan Magaalaa Naqqamtee Obboo Taarikuu Dassalenyi Dabaalaa dubbateera.
Mirga keenna faranjiifi dhaabbilee mirga namuummaa biyyota faranjii irraa eeguu hin qabnu. Faranjiin dantaa mootummaa isii eegachuuf jecha, biyyuma ofii isaaniitii bulchaa jiraaniifu yeroo tokkoofi tokko ifa miti. Gaafa waxabajjii 6,2015 gabaasaa oduu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif hojjachuuf osoo odeeffannoo miidiyaalee keessa abuuraa jiruu, oduu ana ajaa’ibsiise tokko gaazeexaa beekamaa biyya Ingilizii ‘the Telegraph’ jedhamu toora interneetiirratti argee; afaan Ingilizii irraa gara afaan Oromootti hiikee hojjadhe. Odeeffannoon achirra ture: “haleelaallaa shororkeessitoonni fulbaana 2011, Ameerikaa irraatti raawwatan, biyyi Saa’ud Arabiyaa maallaqaan deeggaruun harka keessaa qabdi; dhimma kanarratti, bulchiinsi Buushiifi Obaamaalle qorannoo walitti fufaa gaggeessaniin gabaasa waraqaa qorannoo iccittii fuula 28 harkaa qaban. Haa ta’uu malee, dantaa mootummoota Ameerikaafi Saa’uud Arabiyaa eguuf jecha iccitii kana uummata Ameerikaatiif ifa osoo hin godhin dhoksanii irra taa’anii waan jiraniif, gaabaasni qorannoo kun uummata Ameerikaatiif akka ifa taasifamuuf dhiibbaan bulchiinsaa Buushii irratti dhihaataa jira…” jedha.http://www.telegraph.co.uk/…/US-report-claiming-Saudi-Arabi… liinkii yookiin hidhata kanarraa ka’uudhaan oduun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif hojjadhe kan armaan gadiiti:
Hindoota Diimaa (Red Indians) kunneen biyya isaairraa dhabamsiifamaneran yoo jennu,baduun ajjeefamanii baduu qofa osoo hin taane, eenyummaa, afaan, aadaa, amanta, lafaa…isaanii dhabuu of keessaa qaba. Mee nama Oromoo kan, “Ani Finfinneetti dhaladhe waan ta’eef Afaan Oromoo hin beeku…” jedhu yaadadha. Osoo Oromoon nama san qofa ta’ee jiraatee, Oromoon lafarraa bade jechuudha; akkuma Hindoota Diimaa Ameerikaa durii dulloo kana. Jaarraa tokkoo oliif wanti habashoonni nurratti raawwataa jiranille kanuma. Diinummaa kana kan nutti fidee, tokkooffaa lafaafi qabeenna keenna. Yoo seeraan hin qabatin, qabeenni keeti diina sitti bita.
Gama biraatiin, filannoo woyyaaneen fakkeessite dhiheessitu kun dhugaa nutti fakkaatee, yoo uummanni girrisee ka’u, “dhugaa isinitti hin fakkaatin. Nuuti aangoo kana dhiigaan fidne waan ta’eef, dhiiga malee hin kenninu. Yoo dhiira taatan akka nuuti lollee dhiigaan arganne lolaa dhiigaan argadha…” jedhaa jiran. Maaliif jennaan, woyyaaneen nu’uun walii walii keenna walirratti ijaartee jirti. Loltuulle taanaan, kan miilaan lole fanjirraa ijjatee kaasee du’uufi, kan Tigireef jecha qoma yookiin laphee isaa rasaasaaf kennu irra jireessi loltuun Oromoodha. Yoo itti malachuu dabaanne, kan du’ulle Oromoo ta’a, kan ajjeesulle Oromoo ta’a…
Tags afaan Dargii Qawwee Wayyaanee
Previous Ethiopia’s Economy: Time for the West to Call a Spade a Spade
Next Oromonii biyya Norweey osloo jiraatan atletootaa Oromiyaraa dhufaniif hamileedhan jajabesaan